.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flashsongs ကိုယ်တိုင် လုပ်လိုသူများအတွက် ဆော့ဝဲများ နှင့် effect များ
Flashsongs ကိုယ်တိုင် လုပ်လိုသူများအတွက် ဆော့ဝဲများ နှင့် effect များ
Download : : SWiSH Max3
Download : : SWiSH Max4
SWiSH Max3&4Patch ဖိုင်
SWiSH Max3&4Patch ဖိုင်ထည့်နည်း ebook
လင့်ချိတ်ရန် Button များ
Win မြန်မာဖောင့် အလှများ
4 ground components
လိပ်ပြာ ၃ back ground
နှင်းဆီ back ground(1)
နှင်းဆီ back ground(2)
ပန်းရောင် back ground
Heart back ground
Flower back ground
mouse effect letter
English ဖောင့်အလှများ ဒေါင်းရန်
bubble နောက်ခံ 1
bubble နောက်ခံ 2
mouse Fadein Fadeout
လိပ်ပြာ mouse effect
Mouse Effect Angel
လိပ်ပြာ 1 back ground
Mouse ပုံနှင့် Effect ပြောင်းနည်း
Flashsongs ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမယ့် ဝါသနာရှင်များအတွက် လိုအပ်တာတွေအားလုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး
စုံအောင် တင်ပေးထားပါတယ်..အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..ပျော်ရွှင်ပါစေ..
အထူး အသိပေးခြင်း ။ ။ ဤစာမျက်နှာတွင် တင်ထားသော ဆော့ဝဲလ်များနှင့် အဖက် ဒေါင်းလုပ်လင့်
တော်တော်များများဟာ ပျက်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် Upload လုပ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပေး
ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည် မျှဝေလိုသူတွေကို ပြောချင်တာက ဒီဆိုဒ်က ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို
ကော်ပီကူးပြီ မျှဝေခြင်းထက် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ဒေါင်းယူပြီးတော့ ပြန်လည် Upload လုပ်ပြီး
တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ အကုန်လုံးက ဝိုင်းဒေါင်းနေကြမယ် ဆိုရင် ဒီလင့်တွေကလည်း
အကြာကြီး ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေးနဲ့ ပြန်ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ကူးယူမျှဝေနိုင်ရန် Right Click နှင့် Selete ပိတ်ခြင်း၊Password ခံထားခြင်းများ
မပြုလုပ်သော်လည်း အားလုံးအတွက် လုပ်ပေးထားသော စေတနာကို လေးစားသောအားဖြင့်
တခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်တင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ် ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ Download ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တိုင်းကို Win RAR နဲ့ ချုပ်ပြီး တင်ထားပါတယ်။
ဒေါင်းပြီး သုံးမရဘူး အော်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီနေရာလေးမှာ အစုံရေးတင်ပေးထားပါတယ်။
SWiSH Max3 (သို့)4ကို Install လုပ်ပြီး Key တောင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ ဖတ်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ။
Posted by Thurainlin at 04:33
★⎝⏠⏝⏠⎠တပ်မှူးလေး★⎝⏠⏝⏠⎠9October 2012 at 20:28